Librecon 8th Edition yatove nehurongwa hwechiitiko | Linux Vakapindwa muropa
Librecon 8th Edition yatove nehurongwa hwechiitiko ichi
Isaac | | Misangano / Zviitiko / Hurukuro, Free Software
Librecon ndechimwe cheakakosha zviitiko pamahara matekinoroji, uye yatove nehurongwa hwayo hutsva yeshanduro yechisere ichaitwa gore rino. Kune avo vachiri kusazviziva, Librecon musangano wepasi rese weyakavhurika matekinoroji, bhenji muEurope yekumaodzanyemba, ichipa nzira inoshanda kune aya akavhurika-sosi matekinoroji munzvimbo dzakakosha senge indasitiri, mari kana hutongi hweveruzhinji. Mitikiti yatove kutengeswa kuburikidza iyo yepamutemo webhusaiti yechiitiko, kuti kusvika muna7 vanga vaine 50% dhisikaundi. Iye zvino unogona kusarudza pakati pemitengo miviri yakapihwa: Standard uye Premium.
Ese maviri marudzi ekupasa anosanganisira kuwana kumisangano, maresitorendi uye mahara kuwana kune iyo Bilbao tramu (ichingoratidza iyo LIBRECON kubvumidzwa kwawanikwa) pakati pemazuva Mbudzi 20-22. Kune rimwe divi, iyo Premium inosanganisirawo kudya kwemusi wa21, kuwana nzvimbo dzebhizinesi nemavhidhiyo emakonsati (masymphoni emitambo yakakurumbira yemavhidhiyo inotungamirwa nemutungamiriri weIrish Eimear Noone pamwe neBIOS kana Symphony Orchestra yeBizkaia). Uye kubva kuLxA tinokukurudzira kuti uende pachiitiko ichi uine hunhu hwakasimba hunodzidzisa umo vazhinji vevashandi vanobva muchikamu ichi pamwe nevateereri vanoungana.
Chiitiko chichava mharidzo makumi mashanu, yakagoverwa pakati penyaya dzebhizinesi nemusangano. Izvi zvichadzidziswa nenyanzvi dzakakurumbira kubva kumakambani akaita seMozilla, Hitachi neOrange. Pachavewo nehurukuro dzevatauri mueni mangwanani e21, kusanganisira Julia Bernal weRed Hat, watichava naye kuLxA, Mutevedzeri weMutungamiri weECBIT Marius Felzmann, nezvimwe. Iwe zvakare uchawana matafura ehurukuro uye nyanzvi dzenyika neepasi rese
Musi wa22 ichave yakawanda yakanangana nekuchengetedza cyber, nekuvapo kwaLuis Jiménez, mutevedzeri wemutungamiriri mukuru weCCN-CERT (National Cryptological Center) uye mukuru wezvekuchengetedza kuIberdrola Ángel Barrio. Kana iri foramu, iwe uchave naRichard Stallman nevamwe vatauri, pamwe nehunyanzvi kubva kuSerikat kana BBVA. Zvese izvo uye zvimwe zvakawanda mumazuva mashoma kuLibrecon, urikupotsa here? Ini ndaisazviita…
Mamwe mashoko - Yakazara chirongwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Librecon 8th Edition yatove nehurongwa hwechiitiko ichi
Yese Chaos kupona kunotyisa Doom II mod